Eritrea oo Cabasho Ah Udirtay Qaramada Midoobay (QM). | ogaden24
Eritrea oo Cabasho Ah Udirtay Qaramada Midoobay (QM).
Dowlada Eritrea ayaa lasheegayaa in ay Qaramada Midoobay (QM) u qortay waraaq ay ku codsanayso in wax laga qabto dhaqan xumida xukuumada wayaanaha iyo in lafuliyo go’aamadii hore ee lagu kala xaliyay labada wadan dirirtii dhex marta kadib.
Xukuumada Eritrea ayaa lasheegayaa in ay waraaqdeeda kaga war bixisay marxaladihii uu soomaray dagaalkii uu dhiiga badan kudaatay ee Itoobiya iyo Eritrea dhex maray iyo waliba dhex dhexaadintii lakala dhex dhigay labada wadan.
Dowlada Eritrea ayaa sheegtay in ay gabi ahaanba xukuumada wayaanuhu diiday go’aamadii ay soosaartay maxkamadii loosaaray dhulka ay labada wadan isku haystaan, go’aankaas oo wadanka Eritrea u ogolaanayay lahaanshaha dhulkii ay dirirtu kadhacday.
Dowlada Eritrea ayaa Qaramada Midoobay xasuusisay in hadii ay xukuumada Itoobiya ku adkaysato go’aankeedii khaldanaa isla markaana ay kadhaga adaygto go’aanka maxkamada ay arintaasu cawaaqib xun dhali karto, waxayna dowlada Eritrea sheegtay in wax laga qabto inta ay goori goor tahay.
Qaramada Midoobaya ayaa dhankooda lagu eedeeyay in ay kagaabiyeen waxka qabashada colaada labada wadan waa Eritrea iyo Toobiya e, waxaana Qaramada Midoobay lagu eedeeyay in ay Itoobiya u kilkila duleeliyeen.
Labada wadan ee Itoobiya iyo Eritrea ayaa laga cabsi qabaa in ay dhex marto colaad lamid ah tii 1998-99 taas oo galaafatay nolosha dad kumanaan ah oo qaarkood ay ilaa iyo hada lafahoodii daadsan yihiin dhulkii uu dagaalku kadhacay.